Ilay zazavavindrano kelin'i Copenhague | Vaovao momba ny dia
Ilay zazavavindrano kelin'i Copenhague
Iza no tsy namaky na nanana ilay ny angano mermaid kely? Ary raha mbola tsy tamin'ny endrika an-tsoratra dia tsy dia naharesy ny ankizy intsony ilay sary mihetsika Gutenbergnians. Nandritra ny fotoana vitsy dia nanatrika teo tokoa i Eropa Avaratra noho ireo tantara an-tsary, andian-tsarimihetsika ary sarimihetsika ...
Fa raha manao tantara kely isika, farafaharatsiny efa elaela tao amin'ny fiainantsika i Danemark. Fa maninona Eny, ho an'ny tantaran'i Hans Christian Andersen! Izy no mpanoratra an'i The Sirenita, Akanjo Vaovao an'ny Emperora, Ilay Mpanjakavavy Snow, Thumbelina ary tantara maro hafa mahazatra. Ny Little Mermaid dia iray amin'ny malaza indrindra ary Copenhagen dia nanome voninahitra azy tamin'ny sarivongana.
2 Ilay zazavavindrano kely sy ny sarivongany
Izany dia Mpanoratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX, Danoa, izay nanjary nalaza be tamin'ny tantarany na dia tsy izany ihany no nosoratany. Tamin'ny voalohany dia sahirana izy nandika ny tantara rehetra henony tamin'ny fahazazany ary tsy dia nahomby izy ireo, fa tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia navoaka ny tantara an-tsokosoko maro izay nanome azy fankasitrahana sy vola.
Zaza tokana izy, nanana fahazazana nalahelo noho ny fahafatesan'ny rainy mialoha ny fotoana, nampijaliana tao amin'ny sekoly nipetrahany fony izy nianatra ary rehefa avy nanandrana ny vintana ho mpilalao sy mpihira izy, dia nirona tamin'ny farany nanoratra. Mikasika ny fiainam-pitiavany, ireo izay nandalina ny tantaram-piainany dia nanatsoaka hevitra fa i Hans Bisexual aho ary tiany toy izany ny vehivavy, toy ny lehilahy, na dia tsapany aza ny fihoaram-pefy sasany, angamba ara-pinoana na mifandray amin'ny fanararaotana nataony taloha, ho an'ny fiainana ara-nofo.
Andersen narary voan'ny homamiadan'ny atiny ary maty ny 4 Aogositra 1874 tao amin'ny trano iray any akaikin'i Copenhagen, ary ny taolany dia mitoetra ao am-pasana ao amin'ny fasan'i Frederiksbergs, miaraka amin'ny mpivady sariaka.
Ilay zazavavindrano kely sy ny sarivongany
Ny tantaran'ilay zazavavindrano kely dia ny tantaran'ny zazavavindrano kely tanora sy tsara tarehy maniry ho tonga olombelona. Andriambavy izay manan-drahavavy dimy izy ary araka ny fomba amam-panao rehefa feno dimy ambin'ny folo taona ny andriambavy dia avela hilomano ambonin'ny tany hizaha an'izao tontolo izao. Ilay zazavavindrina kely dia mihalehibe mihaino ny tantaran'ny rahavavavavavaviny, ka ny hahita an'ity tontolon'ny olombelona ity izay henony fahagagana maro dia maro.
Araka izany, rehefa feno dimy ambin'ny folo taona izy dia milomano mankany ambony ary io no fotoana anaovany izany mahita andriana olombelona ambony sambo. Mazava ho azy, Raiki-pitia. Mazava ho azy fa misy tafio-drivotra mahatsiravina, milentika ny sambo ary izy no mamonjy azy. Manomboka eo dia mangetaheta azy ilay zazavavindrano kely ary te ho tonga olombelona hiaraka aminy, na dia maty aloha aza ny olombelona ary manana fihetseham-po mifanohitra. Araka izany dia ampirisihina izy hitsidika mpamosavy hanampy azy avadiho ho lasa tongotra ny rambonao.
Ny feonao no ho feonaoKa na mifanena amin'ny andriana malalany aza izy dia tsy afaka miresaka aminy mihitsy. Ankoatr'izay, ny fandehanana dia hanaintaina azy ary izay fijaliana rehetra dia hisy dikany ihany raha mahazo ny fitiavana ny andriana. Raha izany no mitranga dia hanana fanahin'olombelona izy io, raha tsy izany dia ho levona ao anaty ranomasina toy ny volony. Soa ihany fa nihaona tamin'ny andriana izy ary na dia tsy nanana feo aza izy dia nandihy tamim-pahagagana ary nahavita namosavy azy, fa tsy hisy ho mora.
Amin'ny farany manana fanambadiana milamina ny andriana miaraka amin'ny andriambavy mpifanolo-bodirindrina aminy izay diso izay nanavotra azy tamin'ny ranomasina ka omena ny zava-drehetra mba hahafahan'ny zazavavindrano kely maty noho ny fitiavana. Avy eo, ireo rahavaviny dia mandeha mitady azy ary manome antsy azy: raha mamono ny andriana izy ary mikasika azy ny ràny dia ho zazavavindrano indray izy.
Saingy tsy azony vonoina ireo mpivady ka natsipiny avy tao anaty sambo izy, nanodidina azy ny rano ary rehefa heverinay fa hitsonika ho lasa foam izy dia lasa fanahin'ny rivotra izy, miaraka amin'ny fanahiny iray, izay hanana fotoana hiakarany ny Fanjakan'ny Lanitra ...
Ny tantara dia navoaka voalohany tamin'ny 1837 ary nanana adaptation maro izy io satria natao ho sarimihetsika, sarimiaina, sarimiaina, izany hoe ny sarimiaina japoney, ary na dia mozika aza. Izaho manokana dia tiako ny anime satria raha hiovaova dia fantatry ny Japoney momba ny tantara an-tsehatra.
Fa ahoana ny amin'ny sarivongan'ny zazavavindrano kely? Ny sary vongana dia notaterin'i Carl Jacobsen tamin'ny 1909, bandy tia ballet aingam-panahy avy amin'ny tantaran'i Andersen. Ilay maodely dia mpandihy iray nantsoina hoe Ellen Price ary ny mpanao sary sokitra dia i Edvard Eriksen. Ny takatry ny volan'ny mpanao sary sokitra ihany no tadiavin'ny vidiny hampiasaina ny tavany.
Ilay sarivongana varahina io ary nambara tamin'ny besinimaro tamin'ny volana aogositra izy io 1913. Tao izy hatramin'ny 2010 raha namindra azy vetivety tany amin'ny Shanghai Expo ny governemanta Danoa. Mandra-pahatongan'ny taona 2029 dia zon'ny mpamorona ny sarivongana ka tsy azo atao ny manao kopia raha tsy mahazo alalana avy amin'ny fianakaviana Eriksen.
Ny Little Mermaid of Conpenhagen dia eo amin'ny seranan'i Langelinje ary efa zato taona mahery izao. Ankoatra ny varahina dia manana granite ihany koa izy ary ny marina dia tamin'ny taon-jato sy ny tampon'ny fiainana dia nijaly maro izy asa fanimbana. Indroa nesorina ny lohany, sandry indray mandeha ary imbetsaka nolokoana loko izany. Soa ihany fa naverina tamin'ny laoniny foana izy io ary mbola eo, mandray ny seranan'i Copenhagen.
Inona koa no azo ambara momba ny Little Mermaid any Copenhagen? Eny, ny fahalianana sasany: mandray fitsidihana iray tapitrisa mahery isan-taona ary koa Io no sarivongana be sary indrindra eto amin'ny firenena. Na dia mitantara zazavavindrano iray aza ny tantaran'i Andersen dia manana tongotra / rambo roa ilay sarivongana. Miisa 14 ny kopi eto amin'izao tontolo izao, ny iray any Espana ary arak'izay lazain'izy ireo dia tsy ilay sarivongana eo amin'ny tokonam-baravarana akory ilay tany am-boalohany ary eo am-pelatanan'ny fianakavian'ny mpanao sary vongana ilay sangan'asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Copenhague » Ilay zazavavindrano kelin'i Copenhague
Làlana interrail hahitanao an'i Eoropa